Isbahaysiga Dib u Xoreynta Soomaaliyeed oo soo saaray Warsaxaafadeed ku aadan Munaasabadda Ciidda Soonfur
WARSAXAAFADEED KUSAABSAN MUNAASABADDA CIIDDA SOONFUR
"Waxaad ciideysaan idinkoo madaxbanaanidiinii idiin muuqato"
" Waa hubaal in uusan gumeysigu cimri dheereyn hase-yeeshee waxa uu reebaa ceeb iyo cawaaqib xumo aan ka harin dabadhilifyada" ayuu guddoomiyaha ku daray hadalkiisa, isagoo bogaadiyey muqaawamada & waxqabadkeeda. Sidoo kale Guddoomiyuhu munaasabadda ciidda soonfur awgeed waxa uu hambalyo u dirayaa dhammaan dalalka Islaamka iyo madaxdooda, waxaanu ugu baaqay in ay ku taageeraan shacabka Soomaaliyeed sidii uu xoriyadiisii iyo madaxbanaanidiisii u soo ceshan lahaa, ciidamada Ethiopia-na dalka looga saari lahaa.
"Shacabka Soomaaliyeed waa xusuusnaan doonaa sida ay madaxda dalalka Islaamka iyo kuwa caalamkaba indhaha uga laabteen – intooda aan ka qeyb qaadan- waxyeelaynta joogtada ah ee ciidamada cadawga ah ee soo duulay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed xilli aysan xukuumada sharci ahi aysan dalka ka jirin" ayuu yiri guddoomiyuhu.
Waa wax laga xumaado iyadoo dhiigii shacbka soomaaliyeed uu cadwgu daadinayo, oon, gaajo iyo hoy la'aanna ay la il adarn yihiin intii ka badbaaday xabadda cadawga inay kuwa masuuliyad sheeganaya ay u baratamayaan sidii ay gaari lahaayeen raalli ahaanshaha cadawga.
Guddoomiyaha Isbahaysiga waxa kale oo uu hoosta ka xariiqay sida ay uga go'anatahay isbahaysigiisa xoreynta dalka, waxa uuna yiri waa inay Ethiopia ciidamadeeda ciidda Soomaaliyeed kala baxdaa, shacabka reer Ethiopia-na waxa uu ugu yeeray inay iska qabtaan madaxdooda faraha dhiiga kula jirta ee cadawga ku ah nabadda iyo degegnaanta gobalka haddii ay rabaan inay sii jirto qarannimadooda.
Ugu dambeystii guddoomiyaha waxa uu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay taakuleeyaan kuwooda tabarta daran, sidoo kale hay'adaha samafalka, ururada goboleed iyo kuwa dawliga ahba waxa uu ugu baaqay inay garagaaraan Soomaalida ku waxyeeloowday dhibaatada gumeysiga.